Ndị isi na-eme njem nleta na United United Nations: Secretary General nke UNWTO dị mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ndị isi na-eme njem nleta na United United Nations: Secretary General nke UNWTO dị mma
Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
WTN maka Nhọrọ na UNWTO Election anatala ọtụtụ narị azịza site na ndị isi njem na ndị njem na-elekọta. Ha sitere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba 100 na ọkwa niile nke ụlọ ọrụ ahụ.
UNWTO gbachiri nkịtị ma ọ zaghị ozi email, oku ekwentị, ma ọ bụ ozi mgbasa ozi.
Otu nzaghachi toro onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO bụ Zurab Pololikashvili dị ka nwoke maara ihe, mana ndị ọzọ na-achọ ka e yigharịa Kọmitii Executive UNWTO kwesịrị ịzukọ na Jenụwarị iji họpụta odeakwụkwọ ukwu.
Tụ anya na ndị ozi na-ahụ maka njem nlegharị anya site na mba iri atọ na ise nke otu ndị isi na-eme njem gaa Madrid bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya, nzukọ nhoputa mbụ ga-emesi ntuli aka na-adịghị mma.
Ministersfọdụ ndị ozi gwara eTurboNews, ha kwenyere, mana ha ga-ekwu okwu na ndekọ. Ndị ozi ndị ọzọ gwara eTurboNews ha na onye odeakwụkwọ akwụkwọ enweela nkwekọrịta ruo oge ụfọdụ, tupu onye ọ bụla ọzọ asọmpi ahụ abanye. N'ụzọ dị ịtụnanya, Zurab Pololikashvili nọ na-elekọta mba ndị so na Executive Council ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị n'oge ọ nọ n'ọchịchị, na -emepụta nkwa nke iguzosi ike n'ihe.
Nke a bụ ndepụta ndepụta nke ihe agbakwunyere na arịrịọ ahụ, na-achọ ka ewepụ ntuli aka UNWTO.
Gụọ nkọwa niile, ihe kpatara ya na otu esi eme ya https://wtn.travel/decency/
Mazi Secretary - General: Kwụsị!
N'oge ndị a a na-enwetụbeghị ụdị ya ebe a ga-eyigharị ọtụtụ ihe omume dị mkpa n'ihi ọrịa ahụ, anyị kwenyere na ọ bụ ihe amamihe dị na ya maka Executive ka o jiri nwayọ weghachite usoro ntuli aka iji nye usoro ntụgharị na ịkwanyere ugwu ugwu ma chekwaa ugwu nke ụlọ ọrụ a.
Ana m akwado na anyị kwesịrị inwe nghọta, nghọta na itinye ihe niile na ntuli aka. Echere m na ugbu a, e kwesịrị inwe ọkwa egwuregwu dị larịị ebe ọtụtụ ndị ga-abanye n'ime ụlọ, mana ịnwe abụọ ezughị ezu maka nghọta.
Kwado nkwado niile nke onye bụbu odeakwụkwọ General UNWTO
Arịrịọ a na-eme ọtụtụ echiche na ikpe ziri ezi nke ụwa MYST na-emeri.
Achọrọ m ịkwado arịrịọ ahụ
Biko wughachi njem site na ịkwụwa aka ọtọ ma bụrụ ihe atụ na-enwu gbaa nye ụwa maka nkwụsi ike na nkwado.
Dịka onye so na Kọmitii World maka Omume Njem Nleta M chere na ọ dị ezigbo mkpa na ntuli aka ndị a na n'eziokwu ntuli aka ọ bụla na-eme ihe n'eziokwu, n'ihu ọha, na nghọta na enweghị ajọ mbunobi.
Usoro ochichi onye kwuo uche ya dị mkpa maka ịtụkwasị obi nke oftù UN
Anyị na-akwado arịrịọ a
Je suis parfaition d'accord et soutiens cette aririọ pour l'égalité des mgbanwe et la nghọta na-ezighi ezi nzukọ démocratique de l'élection du prochain secretaire général de l'OMT
Ekwenyere m itinye aha m na arịrịọ ahụ
Iguzosi ike n'ezi ihe nke ahụ ike na-echegharị nnukwu ọdịmma nke ngalaba ndị njem na ụwa kwesịrị igosipụta ọchịchọ nke ndị ọ na-anọchite anya ya.
Ekwenyere m na mmegharị ahụ.
UBARA ANYI GA-AGA N’IHU
Ọ ga-adị mma maka ịme ntuli aka ihu na ihu, mebere nwere ọtụtụ nsogbu ọrụaka !!
United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) kwesiri igba ume maka mmepe niile nke njem nlegharị anya nke mba ụwa. N'ebe a, mkpebi ịme ọkwa na-abịanụ nke odeakwụkwọ ukwu ga-ewere otu olu. Anyị na-akwado arịrịọ e nyefere UN SG Antonio Guterres, UNWTO SG Zurab Pololikashvili na ndị otu World Tourism Organisation.
Nwoke nwoke maara ihe
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya maka yigharia ụbọchị ewepụtara maka usoro a, ebe ọ bụ na a ga-eyigharịrị imirikiti isi ihe ndị ga-eme n’ụwa niile n’ihi ajọ ọrịa na-efe efe. Anyi na ario Sakraiti n'ihi uzo na aghughari na iweghachi ugwu nke ndi otu ha igha n’obere oku mee ihe kwesiri ekwesi.
Ana m akwado atụmatụ ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Ebumnuche ndị dị n'ihu maka ịtọgharị oge bụ ihe ezi uche dị na nghọta na ezi ọchịchị
eme nke oma maka ime ihe
“Akwadoro m nguzo nke abụọ onye bụbu odeakwụkwọ Ọchịchị mere.
“Followinggbaso UNWTO site na mbido na ịbụ enyi Francesco, Taleb na Geoffrey ruo ogologo oge dị ka Chief Editor for Travel and Tourism programmụ na Slovene National Radio na TV enwere m ezigbo afọ ojuju maka ịrụ ọrụ nke SG ikpeazụ nke UNWTO. Ya mere. Anọ m na-emegide mmegide ya banyere ntuli aka nke ọhụrụ SG nke UNWTO, kwa. “
Ekwadoro m nkwanye ugwu nke Onye Isi Odee-Ochie mbu mere
Ekele m WTN. Nkwado m na-anọnyere unu mgbe niile. Maka mmepe nke WTN a na m adị njikere oge niile .M na-akwado atụmatụ a.
“Iji rube isi na nsogbu ndị ụlọ ọrụ na-eche ihu ugbu a na ntụgharị nke mkpebi ndị dị oke mkpa n’oge a, ọ dị ka ihe ezi uche dị na ịtụgharị ntuli aka.
Ekwenyere m na arịrịọ a iji mee ka UNWTO rụọ ọrụ nke ọma.
Na Nkwado nke Arịrịọ
WTN ga-emepụta nkwalite Iwu ọhụrụ maka njem nlegharị anya n'ihi na a na-ahụ anya na nke ugbu a anaghị arụ ọrụ n'oge nsogbu ọrịa na-efe efe
Ekwenyekwara m n'ihi na onye nọ n'ọnọdụ a ugbu a na-agba mbọ izu ohi reelection.
M kwere nkwado m.
Ekwenyere m na arịrịọ a
Ana m akwado nkwenye m na arịrịọ a.
Anyị kwesịrị ịkwalite njem nleta n'ụwa niile
“Ekwenyere m n’elu Akwụkwọ Ozi nke WTN.
“Onweghi onye tozuru etozu ekwesiri ịhapụ ikike na ntuli aka UNWTO.
Iyigharị oge kwesịrị ekwesị ”
Dịka onye nta akụkọ njem nleta, enwere m ohere dị obere ịgbaso ọrụ ahụ ma gwa Dr.Taleb Rifai na Maazị Zurab Pololikashvili okwu. Learningmụta na nhoputa nke odeakwụkwọ ukwu maka 2022-2025 nke UNWTO ghọrọ okwu gbasara ike otu nwoke bụ nnukwu ihe ịtụnanya nye m. Karịsịa n'ihi na ọ na-agba mbọ iwepụ echiche ndị ọzọ. Enweghị ike ịnagide ụzọ a dị egwu nke ndu na - ọbụlagodi - bụrụ akụkụ nke ọdịnihu na njem. Ike njem na mmepe ya pụtara na ndị siri ike n’ozuzu ha, ọ bụghị ọkpọ siri ike nke otu nwoke!
Ọ dị mkpa ijigide iguzosi ike n'ezi ihe na nghọta nke nzukọ - karịsịa n'oge a dị oke mkpa n'akụkọ ihe mere eme anyị.
“Ana m akwado nkwado zuru oke iji yigharia nzukọ a ruo Mee nke 2021 ma ọ bụ ụbọchị na ụbọchị nke General Assembly na Morocco ruru na Septemba nke 2021.
Ngagharị a ga - enye nghọta zuru oke yana ikwupụta ọkwa doro anya na enweghị ahụike zuru oke maka iguzosi ike n'ezi ihe na mbara igwe dị mkpa na World Travel Network.
Ana m akwado arịrịọ a
“Anyị na-akwado ihe ezi uche dị na ya ma na-ahazigharị usoro ntuli aka maka Sec. Gen. UNWTO. Jiri nkwanye ugwu nyefere. “
Ezi uche bụ isi uru nke njem, anyị na-ele ọbịa & azụmahịa njem na-adị ndụ na nkwanye ùgwù anyị maka ndị ọzọ na omume ruru ya mere na ọ kwesịrị ịbụ isi ọdịnaya na uru nke UNWTO
UNWTO bụ onye nnọchi anya ụwa niile na-arụ nnukwu ọrụ na mpaghara njem. N'ụzọ doro anya, ntuli aka na nnukwu nzukọ a ga-abụ nke nghọta n'ụzọ kwekọrọ na ebumnuche na ebumnuche nke UN. Yabụ na ọ bụ naanị ihe kwesịrị ekwesị ịkwado ntuli aka UNWTO.
Ana m akwado arịrịọ ahụ. Ọ dị n'usoro.
Ana m akwado oku a na - akpọ maka “ịda iwu” na ntuli aka dịka ndị njem na-ejide ọnọdụ ike ọrụ kachasị ike nke ngalaba niile.
Anọ m na-eje ozi, n’oge m na Mịnịstrị na-eme njem nleta na egwuregwu nke Thailand, Onye isi oche nke UNWTO Asia na Pacific Region ruo afọ abụọ n’usoro, ma na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị bụbu odeakwụkwọ General UNWTO General, gụnyere ezigbo enyi m, Geoffry Onyema Kwere na Nkwado!
Ana m akwado mgbanwe ụbọchị dị ka akọwapụtara na leta a.
Ana m atụsi ike ka eweghachite ntuli aka nke Secretary General 2022-2025, ka a ga-eme ya na General Assembly na Morocco (Septemba / Ọktọba).
“Anyị kwesịrị ịnwe ọhụụ UNWTO n'ụzọ doro anya ma nwee nwute, ma ọ dị nwute na Secretary General nke ugbu a ahapụla ụlọ ọrụ a ogologo oge na n'ụzọ dị iche iche. Ya mere, m na-akwado ka anyị webata onye ndu ọhụụ nke ga-enwe ike iweghachi aha ọma UNWTO.
Ọ ga-amasị m ịkwado ịkwado ntuli aka nke Secretary General.
Morocco dara ụda ma bụrụ ihe ezi uche dị na ya,
Ana m akwado ebumnuche ndị otu a.
Eeh, anyị na-agabiga ihe isi ike, olile anya na 2021 ga-abụ afọ ka mma maka anyị niile!
KWES WITHR WITH KWURU
Ọ ga-amasị m ịbụ otu n'ime ndị ga-eso na ntuli aka na-abịa na UN WTO odeakwụkwọ General 2021
Ọ ga-amasị m ịbụ otu n'ime ndị ga-ahọpụta onye odeakwụkwọ UNWTO General 2021
Ana m akwado WTN maka ịmasị na Ntuli aka UNWTO ka m na-atụ anya ịhụ na Africa gosipụtara nke ọma, na-ewerekwa okwu maka oge kwesịrị ekwesị maka ntuli aka UNWTO bụ nsogbu dị nro n'oge a mgbe ụwa niile nọ na egwu nke Ọgbaghara covid19. Ya mere eji m obi ike na-akwado arịrịọ a na ndị na-arịọ arịrịọ iji kwalite ịkwụwa aka ọtọ na usoro ntuli aka niile. Nke a ga-eweta mgbanwe dị mma na Global Tourism na ngwangwa site na ọrịa COVID-19 n'okpuru nduzi siri ike nke UNWTO.
KWES ER E ED E ỌR THE PITA.
Kwere nkwenye siri ike na ndenye aha na WTN nyefere ntinye, ọkachasị mkpa maka mmadụ na-ezukọta ma ọ bụghị nzukọ ọgbakọ.